अमिर-किरण डिभोर्सले बलिउडमा हलचलः उनिहरूले किन लिए डिभोर्सको कठोर निर्णय ? – Taja Khawar
अमिर-किरण डिभोर्सले बलिउडमा हलचलः उनिहरूले किन लिए डिभोर्सको कठोर निर्णय ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २०, २०७८ समय: २:१६:५२
एजेन्सी – बलिउडका अभिनेता आमिर खान र उनकी पत्नी किरण रावले आफुहरुको वैवाहिक जिवनको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि बलिउडमा हलचल मच्चिएको छ ।
२८ डिसेम्बर २००५ मा अमिरले दोस्रो पटक विवाह गरेका थिए। विवाह पछि दुबै मिलेर धेरै फिल्म समेत बनाए। उनीहरुका एक छोरा छन्, जसको नाम आजाद राव खान हो। आमिर खानको २००२ मा उनकी पहिलो पत्नी रीना दत्तासँग सम्बन्धविच्छेद भयो। त्यसपछि किरण रावसंग दोस्रो पटक विवाह गरेका थिए ।
The Most Amazing Exotic Pet Cats You Can Own!
दुबैले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयवारे संयुक्त वक्तब्य जारी गरेका छन् । त्यसमा उनीहरुले ब्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेपनि ब्यवसायीक र ब्यापारीक रुपमा भने आफुहरु पार्टरकै रुपमा रहने बताएका छन् । साथै आफ्नो सन्तानको हेरचाह पनि उनीहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आमिर खान र किरण राव पहिलो भेट फिल्म लगानको छायाँकनको बेलामा भएको थियो। यो कुरा आमिर आफैंले एक साक्षात्कारको बेला खुलासा गरेका थिए। आमिरले भनेका थिए कि त्यस समयमा किरण मेरो टीमको सदस्य मात्र थिइन् । उनी फिल्ममा सहायक निर्देशकको रूपमा काम गर्थिन्।
आमिरले भनेका थिए कि जब मैले किरणलाई रीनाबाट सम्बन्ध विच्छेद पछि पहिलोपटक भेटे हाम्रो खास खास कुराकानी पनि भएन। उनी त्यतिखेर मेरो साथी पनि थिइनन्।
आमिर खानले एकपटक किरणले उनलाई फोन गरेको बताएका थिए। यो फोन ३० मिनेट सम्म चल्यो, त्यसपछि उसले किरणलाई प्रेम गर्न थाले । हामी लगभग एक वा दुई वर्षको लागि यस्तै बैठक राख्यौं र त्यसपछि विवाह गर्ने निर्णय गर्यो। अन्तर्वार्ताको क्रममा आमिरले किरण बिना आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्न पनि नसक्ने बताएका थिए । यद्यपि अब उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको खबरले बलिउडमा हलचल भएको छ ।
उनिहरूले केहि पहिलादेखि नै डिभोर्स गर्ने तयारी गरेको खबरहरू बाहिरिएका थिए तर स्पष्ट रूप के कारणले डिभोर्सको कठाेर निर्णय लिए भन्ने चाँहि खुलाएका छैनन् ।
Last Updated on: July 4th, 2021 at 2:16 am